Njani i-non-geomatics ibona iimephu- iiGeofumadas
Njani i-non-geomatics ibona iimephu
NgoFebruwari, 2010 Iiphotography, Internet kunye neBlogs
Ukufumana ukuphazamiseka okufutshane, kweli veki lishicilelwe kuyo 20minutos.es inqaku malunga nomxholo weengqungquthela, ngetoniki ukuba uthisha wesigaba sesithandathu uza kuchaza xa uthetha ngeemephu zehlabathi.
Kufanelekile ukujonga iimbono, inceba -ironic- yokuba zininzi kakhulu, kodwa zilapha:
Indlela inokuthi intatheli ibonakalise ngayo ukubhala malunga nemiba yobugcisa inomdla.
kum ukuba baxelele ukuba yi-datum
Yaye inyawo yam enkulu inkulu kunelanga!
Indlela yokuziphatha (ye-geodesic): Ukuba ubona imephu ungacingi malunga noko kukutshoyo, ukuba ngubani ongenzileyo.
Ihlabathi linamanzi ngaphezu komhlaba, bulela ukulunga, kuba amanye amaplanethi ayinayo inzuzo kwaye yingakho kungekho nobomi.
Kwaye isiqingatha asiyi kwazi nokuba iphi iGreenland… imizuzu engama-20, ubuza kakhulu!
Inyaniso kukuba iSpeyin kwi-geographical proportion is ** **.
Akwaba bendiyindawo ...
Umhlaba mithathu-ntathu kwaye ayinakwenzeka ukuba imele kwindiza. Chukumisa izandla zakho ...
Akunakwenzeka ukumela ukuba kuye kwavela kumntu ngumntu. Yeyiphi ibinzana eliyingqondi!
Andiziyo kuba ndiyayesaba!
ISEBE LEZONYAKA NJENGOBA UWENZA!
Ndiya kuqhubela phambili ezinye iindaba, kwaye umhlaba uphandle, emva kokususa yonke ioli, ndiyathemba ukuba akukho mntu unokucinga ukuba wenza i-X-ray evela emoyeni ngenxa yoko ukuba siya kuthusa.
Ngaba amaphephandaba angayenza ngaphandle kwe-Wikipedia?
Uthabatha iGoogle Earth kwaye ubona ngaphezulu okanye ngaphantsi kwamanani.
imizuzu 20, ndiza kuninika omnye sokuqala isithuba ukuya phambili: Ndicinga amaTshayina kuba izinto ezintsha ezimbini emikhulu: omnye inaliti kusoloko ibonisa entla, yaye omnye ngumgubo ezimnyama deflagrates, kwaye ukuba bangene engxoweni, beqalisa kuthinteleke ukubola okudalwa kwaye aphule izinto.
Imephu ebalaseleyo imephu ye-clitoris eyenziwa nguNgqongqoshe wethu obalaseleyo wokulingana (phawula ithoni yokukrakra).
Ngaba baye baguqula i-Topography ibe yobunjineli?
Iziqithi zaseCanary asisondele kwiSpeyin kwaye zide ukusuka eBrazil njengoko kubonakala. Enyanisweni, iminyaka emininzi edlulileyo iinqwelo-moya zenze lolo hambo ukuba luwele umlambo.
Nangona iyi-geoid kwaye ezo zinto, zinokumelwa ngokuthembekileyo kwi-2D ngendlela ethembekileyo, enye into kukuba akukho mntu uqondileyo ukuba imephu iza kuboniswa njani, kodwa yiza, ndiyathandabuza ukuba ukwenza umzobo we-3D "ngokuchanekileyo" kwemilinganiselo akunako emva koko thabatha inqwelomoya enokusika okwahlukileyo kwaye uyihlanganise:
Ngamanye amagama, i-clitoris yam ayonakalanga, kukuba ndiyibona injalo kwimephu yam ye-clitoris, kuba ayiyondlwana ... indlela endizole ngayo!
Kwezinto ezimbalwa ezilungileyo ndifumene i-Buzz, nge Jorge, (kungekhona umvuzo) :)
Post edlulileyo«Ngaphambilini Baphi abasebenzisi be-GIS abaninzi?
Post Next GPS yaseBhabheli, okusemandleni ukuze isebenze dataOkulandelayo »
Impendulo enye ku "Injani i-geomatics ukubona iimephu"
Ndifile ndihleka! Kukho abantu ngokwenene yonke into!